महिलाको पहिचानको मूल्य ज्यान ! |
प्रकाशित मिति :2018-02-15 14:33:26
श्रीमानसँग नागरिकता र विहे दर्ता बनाइदिन पटक–पटक अनुरोध गर्दा उल्टै कुटपिट गरेपछि गत पुस ३० गते हजरा खातनु न्याय माग्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा पुगिन् ।
श्रीमान् रसिद राइनसहित उनका परिवारलाई राखेर प्रहरीले मिलापत्र गरायो । रसिदको परिवारले बिहे दर्ता गरिदिने, नागरिकता बनाइदिने सहमति गरेपछि हजरा घर फर्किन् ।
तर, प्रहरीको रोहबरमा भएको सहमति हजराको परिवारले मानेन । सहमति भएको १ महिना पनि नहुँदै हजरालाई श्रीमानसहित परिवारले नै जलाए । अर्थात् पहिचान खोज्दाको मूल्य जलेर चुकाउनुपर्यो । हजरा जलिन् । उपचारको लागि राजधानी काठमाडौं ल्याइएको ९ दिनपछि उनको मृत्यु भयो ।
गएको जेठ ३० गते शोभा राईले पनि नागरिकता बनाइमाग्दा श्रीमानबाटै जल्नुप¥यो । नागरिकता बनाइमाग्दा ‘किन चाहियो भनेर थर्काएका थिए’ । ३ सन्तानकी आमा शोभाले सन्तानको जन्मदर्ता आफ्नो नागरिकता र बिहे दर्ताको लागि श्रीमानसँग अनुरोध गरेकी थिईन् ।
श्रीमान् राजु कसाई नागरिकता बनाइदिन राजी भएनन् । उल्टो शोभाको शरीरमा मट्टितेल खन्याए, जलाए । अनि अस्पताल पु¥याएर छाडिदिए । उपचारपछि शोभाको शरीरमा लगाइएको घाउ त निको भयो । यद्यपी, उनको विहे दर्ता, नागरिकता र बच्चाको जन्मदर्ता अझै बनेको छैन । उनी पहिचानविहीन छन् ।
यी घटनाले हाम्रो समाजको आम प्रवृत्ति सोच्न बाध्य बनाउँछ । बुबाको देहवसान हुँदा म ८ वर्षको मात्रै थिएँ । आमाले निकै संघर्षले हामीलाई हुर्काउनुभयो । तर, मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमी सोध्ने कसैले पनि मेरो आमाको नाम सोध्दैनन् ।
बुबाको पहिचानसँग जोडेर आफूलाई चिनाउनु पर्छ । मलाई चिन्नको लागि मेरो आमाको पहिचान गौण हुन्छ । कसैले मलाई आमाको नामबाट चिन्न खोज्दैन । स्वर्गवास भइसकेको बाबुको परिचयबाट आफूलाई चिनाउनुपर्ने बाध्यतामा म हुन्छु ।
नेपाली महिला आफ्नो पहिचान गुमाएरै बाँचेका छन् भन्ने यो उदाहरण हो । हुन त संविधानको धारा १२ ले महिलालाई वंशीय अधिकार दिएको छ । ‘यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ’ भनेको छ । त्यस्तै धारा ३८ (१) ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनेको छ ।
महिला स्वयं पहिचान गुमाएर बसेको अवस्थामा उसले पाएकी यो वंशीय हकको अर्थ के ? पहिला त उसले आफ्नो पहिचान पाउनुपर्यो । नेपाली महिलाको एकल पहिचानलाई समाजले चिन्दैन, चिन्न खोज्दैन । फलतः पहिचान खोज्न पहल गर्दा महिलाले आफ्नो ज्यानको जोखिम मोल्नुपर्छ । कि त आफ्नो पहिचानको आधार नागरिकता बनाउनको लागि श्रीमानको निगाह कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।
श्रीमानले विहे दर्ता गरिदेलान् । नागरिकता बनाइदेलान् भनेर कुर्दाकुर्दै कति महिलाहरू त ‘अनागरिक’ हुनुपरेको अवस्था त माथिको उदाहरणले प्रष्ट पार्दछ । श्रीमानको अनिच्छाका कारण कतिले सन्तानको समेत जन्मदर्ता र नागरिकता बनाउन पाएका छैनन् ।
नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत भन्दा बढी छ । तर, गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म नागरिकता लिनेमध्ये महिलाको संख्या करिब २० लाखले कम छ । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार १ करोड १२ लाख ७ हजार ३ सय ३ जना पुरुषले नागरिकता लिँदा ८१ लाख ६७ हजार ३ सय ४० जना मात्रै महिलाले नागरिकता लिएका छन् । यो तथ्याङ्कले पनि प्रष्ट पार्छ कि महिला पहिचान लिन कति पछाडि छन् भन्ने ।
जन्म दर्तामा पनि पुरुष कै संख्या बढि छ । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको २०७३ सालको तथ्याङ्क अनुुसार कूल ७ लाख २१ हजार ३ सय २६ जन्मदर्तामा पुरुषको संख्या २१ हजारले बढी छ ।
स्थानीय तहले समस्या सुल्झाउन सक्छ
धेरै महिलाहरू विहे दर्ता, नागरिकता, सन्तानको जन्मदर्ता श्रीमानले नगरिदिए नपाउने सोचेर बसिरहेका छन् । अब महिला पहिचानविहीन भएर बस्नु हुँदैन । नागरिकता तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न किन जान सकिन भनेर सोच्नुपर्छ ।
नेपाली महिलाले पटक–पटक पहिचानको लडाईं लड्दै आएका छौं । लडाईंकै उपज, नेपालको संविधानले महिलाको वंश चिनेको छ । संवैधानिक रुपमा महिलाले वंशीय हक स्थापित गरिसकेका छन् । अब पालो यसको कार्यान्वयनको हो ।
यो सुल्झाउनै नसकिने समस्या पनि होइन । घरमा श्रीमानले हुँदैन, सक्दिन भनेपछि आफ्नो पहिचान खोज्ने ढोका नै बन्द भएको ठानेर नबसे महिलाले पहिचानविहीन अवस्थामा बाँच्नुपर्ने बाध्यता पक्कै हुँदैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पछि अब स्थानीय तहले महिलालाई पहिचान दिने ढोका खोलिदिन सक्छ । महिलाले आफ्ना वडा तहका जनप्रतिनिधिलाई घच्घच्याउने सुनौलो समय पनि यहि हो ।
नेपालको संविधानको अनुसुची ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा व्यक्तिगत घटना जन्म, मृत्यु विवाहको तथ्याङ्क राखेको छ । संघीय मामलाका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले महिलाका समस्या सुल्झाउन सक्छन् ।
‘वडा तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना मतदाता चिनेका हुन्छन्’ सापकोटाले भने ‘श्रीमानले नागरिकता बनाइदिएनन् भने उनीहरूको सिफारिस जनप्रतिनिधिले गरिदिन सक्छन् ।’
स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी गरौं
२० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलालाई न्याय लिन पनि सहज बनाएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका स्तरमा स्थानीय न्यायिक समिति छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वा नगरका उप–प्रमुख संयोजक रहेका न्यायिक समितिले तपाईंको गाउँमै यस्ता समस्याको छिनोफानो गर्न सक्छ ।
नागरिकता वा विहे, जन्मदर्ता नगरिदिए न्यायिक समितिमा उजुरी गरौं । अधिकांश स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष महिला भएकाले महिलाका समस्या उनीहरूले सहजै सुनिदिन सक्छन् ।
प्रदेशसभाका बैठक लगातार बसिरहेको छ । प्रदेशसभाले सरकार गठन पछि आफ्नो अधिकार अन्तर्गतको कानून बनाउनु पर्छ । संविधानको अनुसूची ९ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अन्तर्गत पाएको व्यक्तिगत घटना दर्ताको अधिकार प्रादेशिक रुपमा स्थापित गर्न प्रदेशसभाले कानून बनाउन सक्छ ।
अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कानून नहुँदा अहिले जनप्रतिनिले व्यक्तिगत इच्छाको भरमा सिफारिस गरिदिन सक्छन् । तर, प्रदेश सभाले कानून बनाएर यो समस्या सम्बोधन गर्न सक्छ ।
श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि गाउँ–गाउँका महिलाले व्यक्तिगत घटना दर्ता, नागरिकता नहुँदा अधिकारबाट वञ्चित भएर बस्नुपरेको अहिलेको यथार्थ हो । उनीहरूले पहिचानको लागि लड्दा थप अन्यायमा पर्ने गरेका छन् ।
त्यसैले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले महिलाका पहिचानको मूल्य ज्यानसँग लगाउनुपर्ने अवस्थाको प्रत्याभूती दिएर अधिकारविहीनहरूलाई घरआँगनमा सरकारको अनुभूती गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो । तबमात्रै नेपाली महिलाहरुले यो देश हाम्रो पनि हो भन्ने कुराको महसुस गर्नेछन् ।